I-STUDIO / ECELENI KWEBHISHI NE-PLAZA ENKULU/UVULANDI - I-Airbnb
I-STUDIO / ECELENI KWEBHISHI NE-PLAZA ENKULU/UVULANDI
Lo de Marcos, Nayarit, i-Mexico
I-ifulethi elisevisiwe ephelele ibungazwe ngu-Walter
I-BoHo Studio itholakala enhliziyweni ye-Lo de Marcos. Ungathola umnyango okuthathe esitezi sesibili phakathi kwesitolo se-Butcher ne-ejensi yokuvakasha i-X-Plore. Ine-WiFi ekhethekile yezivakashi kuphela, isiteshi sokusebenzela nokuningi, futhi njenge-balcony enekamelo lokudlela ukuze ukwazi ukujabulela ukudla kwakho ubuka idolobha elihle noma uphuze ikhofi lakho lasekuseni.
Ibhishi likude ngezakhiwo ezimbili nje ukusuka e-BoHo Studio ngakho ungahamba nje lapho futhi ubuke ama-sunsets amahle kakhulu engake ngawabona
I-Estudio Bo-Ho inakho konke okudingayo. Ngenkathi uhlala e-BoHo Studio uzoba negumbi lokugezela eligcwele elinamathawula amabili omzimba, izandla ezimbili noma amathawula obuso kanye nenduku yesibuko engu-5X esixekweni esiyinhloko ukusuka egumbini lokugezela, kushawa uzothola i-shampoo, isimo sezinwele, insipho yomzimba ewuketshezi namanzi ashisayo, umfutho wamanzi mhlawumbe uzoba phansi ngoba kuwo wonke amaDolobha umfutho wamanzi uphansi.
Esiteshini Somsebenzi uzoba nesibani sedeski ukuze ube nokukhanya okungcono ngenkathi usebenza futhi uzoba namapulagi amaningi ukuze ukwazi ukushaja ifoni yakho nekhompyutha yakho futhi ekugcineni kodwa hhayi okungenani uzoba nesihlalo sedeski sokuphumula kwakho okungcono.
Ikhishi linesitofu sikagesi esinamapuleti amabili, i-crockery ephelele yabantu ababili namapuleti, izinto zokudlela, imimese, amapani, izinkomishi, njll., nayo inesiqandisi. Uzothola i-jugando yamahhala yamanzi ngenkathi uhlala.
I-BoHo Studio inekhabethe eliphelele labantu ababili eliza namahhuku, ubhasikidi ukuze ukwazi ukubeka izingubo zakho ezisongiwe nendawo ukuze ukwazi ukubeka izicathulo zakho noma izicathulo.
Ikamelo lokudlela liku-balcony ngakho ungajabulela ukudla kwakho noma ikhofi lakho ngaphandle ngenkathi ubuka Idolobha elihle lase-Lo de Marcos.
Ukuze uphumule, i-BoHo Studio inombhede ogcwele ongu- Umatilasi phezulu ukuze ube nokuphumula okungcono kakhulu ohambweni lwakho, iphinde ibe nemicamelo emibili kababa ye-goce, imiqamelo emibili ne-quilt neshidi.
Futhi unosofa omncane ukuze uphumule kancane noma uhlanganise izimbadada zakho
I-Lo de Marcos iyidolobha elithule kakhulu nelinokuthula, bonke abantu abahlala lapho bangabantu abafika ekhaya futhi isivakashi esivakashela u-Lo de Marcos size ukuzophumula futhi sihlukane nedolobha. Abantu babumbene kakhulu futhi okuhle kunakho konke ukuthi abantu bendawo baphatha bonke abantu abasha sengathi bawumndeni wakubo.
Hlola ezinye izinketho ezise- Lo de Marcos namaphethelo